ဂရိအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
(345 ပျမ်းမျှအားမဲ: 4.00 )5ထဲက
Loading ...လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်ဂရိနိုင်ငံကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏နံပါတ်တစ်ချွန်ထက်တိုးလာခဲ့သည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဂရိနိုင်ငံအတွက်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဝသကဲ့သို့, ဂရိကာစီနိုလောင်းကစားရုံနာမည်ကျော်နွေရာသီအားလပ်ရက်ကာလအတွင်းအားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးနှင့်သာကစားသမားကိုဆွဲဆောင်ဖို့သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်နေတာ။ ဤအအားထုတ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, ဂရိလောင်းကစားရုံ Las Vegas မှာစံပြနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ သူတို့ကဇိမ်ခံနေရာထိုင်ခင်း, အပန်းဖြေ, အားကစားလှုပ်ရှားမှုများ, ဖျော်ဖြေရေးတင်ဆက်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, အပိုကြီးတဲ့ဟိုတယ် / အပန်းဖြေစခန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ကဒ်ဂိမ်းများကိုဂရိယဉ်ကျေးမှု၌အလွန်လူကြိုက်များဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဂရိနိုင်ငံကာစီနိုလောင်းကစားရုံမဟုတ်တိုင်းပြည်အနှံ့ကလပ်အသင်းကစားကဒ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်ပေမယ့်ကာစီနို Marketing ကိုအဓိကအားဖြင့်နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်ရည်ရွယ်သည်။
ထိပ်တန်း 10 ဂရိအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
ယနေ့ကြွယ်ဝသောသမိုင်းနှင့်အတူမြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတွင်တိုင်းပြည်အပန်းဖြေစခန်းအတွက်ဆက်လက်ဥရောပအကောင်းဆုံးလောင်းကစားရုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်။ ဒီတိုင်းပြည်ကပထမအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲ, ပြိုင်ဘက်ကင်းအစားအစာနှင့်၎င်း၏ဒဿနပညာရှင်ကျော်ကြားသည်။ ဒီတော့ CasinoToplists ဂရိနိုင်ငံမှစလှေတျတျော!
ဂရိနိုင်ငံ - ပထဝီနဲ့သမိုင်းတစ်နည်းနည်း;
ကာစီနို« Mont Parnes »။
ဂရိနိုင်ငံလောင်းကစားပြန်ရှေးမှစတငျရမယ့်တာရှည်သမိုင်းရှိပါတယ်။ ရှေးခေတ်ဂရိလူမျိုးအသည်းအသန်ကစားသမားခဲ့ကြသည်နှင့်ဂိမ်းများကိုဘုရားသခငျ၏မူလအစအတွက်ယုံကြည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဂရိဒဏ္ဍာရီထဲမှာ, ဖို့အတွက် Titans တွေကကျော်အောင်ခြင်းပြီးနောက်, ဇုနှင့်သူ၏ညီအစ်ကိုများကို Poseidon မှာနှင့်ဟေးဒီးတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ကမ္ဘာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ရရှိသွားတဲ့သူကိုဆုံးဖြတ်ရန်စာရေးတံချတဲ့ဒဏ္ဍာရီလည်းမရှိ။ မရဏာနိုင်ငံ - သမုဒ္ဒရာနှင့်ဟေးဒီး - zeus အဆိုပါ့ Olympus, Poseidon မှာအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ပို့စ်များကိုဒီဖြန့်ဖြူးသည်ကမ္ဘာ့၏တန်ခိုးတို့အရိုးကိုသုံးပြီးကစားခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုအားဖြင့်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ဒါကြောင့်အရေးကြီးသောမဟုတ်ပါဘူး။
လောင်းကစားများနှင့်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများ၏ဇာစ်မြစ်ရှင်းပြသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဒဏ္ဍာရီ။ Tycho ပြီးတာနဲ့ကံဇာတာ၏နတ်ဘုရားဇု (ထို့နောက်လူငယ်တစ်ဦးသည်ပလေးဘွိုင်နှင့် libertine) သူမ၏တို့ကိုလှည့ခဲ့ဘယ်မှာ့ Olympus ၏ရိပ်ရတဲ့အာရှရပင်အတွက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ သာရလဒ်ကိုကိစ္စတွင်သာဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သည်အဘယ်မှာရှိကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းများကိုတီထွင်နှစ်သက်ရှာတွေ့မှတစ်ဦးပုံမှန်မဟုတ်သောကလေးက - ဤပြည်ထောင်စုကနေမိန်းကလေးတစ်ဦးကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။ သူမသည်ပျော်ရွှင်စွာကစားသမားများအကြားသညျထသောစကားများရန်ဖြစ်မှာစူးစိုက်ကြည့်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေစိတ်ပျက်အရှုံးသမားတိုက်တွန်းခဲ့သည်။ သူမ၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သမီးကျူးလွန်, တိတ်တဆိတ် unfading အလင်းမီးရှို့ဖြတ်သွားသဖြင့်သွေးဆောင်ရာတံခါးခုံမှာ, သူမ၏အိမ်များကိုပေး၏။
ဒဏ္ဍာရီအပြင်လောင်းကစားများနှင့်စစ်မှန်သောသမိုင်းကိန်းဂဏန်းများဖော်ပြထားခြင်း။ ထို့ကြောင့်ထဲမှာ "Odyssey," ဟိုးမား screamers Troy တွေရဲ့ဝိုင်းထားခြင်းများအတွက်စောင့်ဆိုင်းပျင်း, ဂရိစစ်သားဖျော်ဖြေခြင်းငှါ, အန်စာတုံးကိုကမ်းလှမ်းဘယ်လိုဇာတ်လမ်းပြောပြသည်။ တစ်ဦးကဂရိသမိုင်းပညာရှင် Plutarch အန်စာတုံးရဲ့ဂိမ်းတစ်ခုအသည်းအသန်ယပ်ခဲ့သူတစ်ဦးပါရှမိဖုရား Parisatis, ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကင်လုပ်ခိုင်းအာရှကနေဂရိနိုင်ငံမှယူဆောင်အပေါင်းတို့နှင့်လူမှုရေးအလွှာအကြားရေပန်းစားခဲ့သည်။ စနစ်တကျဂိမ်းအဘို့အလတ်လောင်းကစားရုံ progenitors - အထူးသောနေရာများရှိပါသည်။ သို့သော်ဂရိအမတ်များအများစုလောင်းကစားရည်ညွှန်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြု၏အမြစ်ထိခိုက်, အများပြည်သူကိုယ်ကျင့်တရားတစ်ခုစိန်ခေါ်မှုအဖြစ်ဖျော်ဖြေရေးဒီလိုမျိုးစဉ်းစား, အပေါ်သို့လန်ဒီသိတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ incorrigible ကစားသမားများအတွက်တစ်ဦးကပြစ်ဒဏ်, မခွဲခြားဘဲမိမိတို့၏လူမှုရေးအနေအထားများ, ကျွန်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ခေတ်သစ်ဂရိနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း, လောင်းကစားဝိုင်း-related အဖြစ်အရည်အချင်းအာဏာပိုင်များမှတစ်ဆင့် gemblingovy စျေးကွက်ထိန်းညှိများအတွက်အခြေအနေများဖန်တီးထားသည်။ လောင်းကစားဝိုင်းမှဂရိနိုင်ငံရဲ့သဘောထားကအစိုးရမူဝါဒလောင်းကစားဝိုင်းမှလူများကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားမှရည်ရွယ်သည်အလွန်တင်းကျပ်သည်။ ဂရိဥပဒေအရကစားလောင်းကစားဝိုင်းတစ်ခုသာလောင်းကစားရုံအတွင်း၌ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ဒေသခံဥပဒေပြဌာန်းချိုးဖောက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုကိုပေးဘို့အကာစီနိုလောင်းကစားရုံအပြင်ဘက်လောင်းကစားနှင့်လောင်းကစားအမျိုးအစားအားလုံးကိုတင်းကြပ်စွာ, တားမြစ်သည်။
ဂရိနိုင်ငံအတွက်ပထမဦးဆုံးလောင်းကစားရုံကိုသာလက်ရှိတိုင်းပြည်အတွက် 1928 ဥပဒေရေးရာကာစီနိုလောင်းကစားရုံ running, Loutraki ဧရိယာ၌9အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဂရိနိုင်ငံကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏စစ်ဆင်ရေးဒီဇင်ဘာလ 20, 2011 ထူထောင်ခဲ့သည့်လောင်းကစားကော်မရှင်, ထိန်းညှိ။ တိုင်းပြည်အတွင်းမြေယာ-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏လိုင်စင်, ကြီးကြပ်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု: အောက်တိုဘာလ 2013 ခုနှစ်တွင်၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများ၏အတိုင်းအတာဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါကော်မတီငါးနှစ်တစ်သက်တမ်းအတွက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သူရှစ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်တစ်ဦးဥက္ကဋ္ဌ၏ပါဝင်ပါသည်။ ကာစီနို Mont Parnes, ကာစီနို Korfu နှင့်ကာစီနို Rodos: ပထမဦးဆုံးလိုင်စင်, 1994 အတွက်သုံးကာစီနိုလောင်းကစားရုံထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်။ အနည်းငယ်အော်ပရေတာများ၏လက်၌ရှိသမျှကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံ: ဂရိနိုင်ငံမှာတော့အဘယ်သူမျှမလက်ဝါးကြီးအုပ်ရှိသေး၏။ သူတို့ထဲကအကြီးမားဆုံး Thessaloniki အတွက်ကာစီနို Mont Parnes လောင်းကစားရုံလည်းပါဝင်သည်သောရင်ခွင်ပိုက်ကာစီနိုမှာဖြစ်ပါတယ်။
2002 ခုနှစ်တွင်ဂရိအစိုးရအများပြည်သူသောနေရာများအားလုံးကိုအီလက်ထရောနစ်ဂိမ်းထဲမှာဂိမ်းတားမြစ်ထားသည့်အငြင်းပွားဖွယ်ဥပဒ 3037 / 2002, လွန်။ ဒါဟာခက်ခဲတဲ့ဥပဒသာသြဂုတ်လ 2011 အတွက်ရုပ်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါဥပဒေသစ်တာဝန်ရှိဂိမ်းကစားခြင်း၏အခြေခံမူထွက်သတ်မှတ်နှင့်တရားဝင်ဂရိနိုင်ငံအတွက်အလောင်းအစားနိုင်တော့မည်ဖို့လိုအပျကွောငျးဒါချေါဦးချင်း "ကစားသမားကတ်များ" ကိုမိတ်ဆက်။ တစ်ဦးလောင်းကစားရုံများတွင်ကစားနိုင်စေဖို့, ဟေလသလူ 21 နှစ်ပေါင်း၏အသက်အရွယ်ရောက်ရှိပါပြီ။
လောလောဆယ်ဂရိနိုင်ငံကိုးလိုင်စင်ရကာစီနိုလောင်းကစားရုံလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ သူတို့ကပြည်မကြီးနှင့် Rhodes, Syros နှင့် Corfu ၏ဂရိကျွန်းများပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ အများစုမှာကာစီနိုလောင်းကစားရုံတနင်္လာနေ့ကနေတနင်္ဂနွေဖွင့်ဖြစ်ကြပြီး 24 နာရီတစ်ရက် staffed ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ထိုကဲ့သို့သောကစားတဲ့, Blackjack, ဗီဒီယိုဖဲချပ်ဝေ, Punto Blanco, Baccarat နှင့် slot ကစက်တွေအဖြစ်လူကြိုက်များဂိမ်းဖြစ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်ဖဲချပ်ဝေပြိုင်ပွဲအိမ်ရှင်အဖြစ်။ အဆိုပါစားဆင်ယင်အများဆုံးဂရိကာစီနိုလောင်းကစားရုံအတွက်ကုဒ် - မတ်ပေါ့ပေါ့ပေမယ် beachwear အတွက်အတွင်း၌သွားကြဖို့မကြိုးစားဘူး။
1 ။ ကလပ်ဟိုတယ်ကာစီနို Loutraki
ကာစီနို Loutraki - ဂရိနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးလောင်းကစားရုံ။ ဒါဟာ Loutraki-Agioi Theodoroi ၏အပန်းဖြေစခန်းအတွင်းရှိ eponymous ဟိုတယ်ရှုပ်ထွေးမှာတည်ရှိပါတယ်။ ဤသည်ကိုလည်း spa နှင့်ကွန်ဖရအဆောက်အဦဝါကြွားတတ်သည့်ဥရောပတိုက်တွင်အကြီးဆုံးလောင်းကစားရုံတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကစားသမားများဖြစ်သောကောရိနသုတူးမြောင်းသည်ရှေးဟောင်းယဥ်ကျေးမှုပြတိုက်နှင့် Apollo ၏ဗိမာနျတျော, ကောရိနသုအဖြစ်ဧရိယာ၏မြင်ကွင်းများ, ပျော်မွေ့ဖို့သူတို့ရဲ့အခမဲ့အချိန်အတွက်ကစားနိုင်ပါတယ်။
2 ။ ရင်ခွင်ပိုက်ကာစီနို Thessaloniki
ဒါဟာဂရိနိုင်ငံအတွက်ရေပန်းအစားဆုံးကာစီနိုလောင်းကစားရုံ Thessaloniki သည်ဂရိနိုင်ငံ၏ "မြောက်ပိုင်းမြို့တော်" နဲ့ 1996 ကတည်းက၏မြို့တွင်တည်ရှိသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမာကေဒေါနိလေဆိပ်အနီးတွင်တည်ရှိသောနှင့်မြို့၏သော့နေရာတွေကနေတစ်ဦး 20 မိနစ် drive ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံအဆောက်အဦးက၎င်း၏ကြွယ်ဝသောအလှဆင်ဘို့လေးစားသည်။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း 893 slot ကစက်တွေနဲ့ 66 စားပွဲပေးထားပါတယ်။ ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း 18 slot ကစက်တွေနဲ့ 14 စားပွဲရှိပါတယ်သည့်အမြင့် roller ကလပ်ရင်ခွင်ပိုက်များအတွက်ပုဂ္ဂလိကအခန်းတစ်ခန်းလည်းရှိပါသည်။
3rd ကာစီနို Rhodes
Rhodes ကာစီနိုက၎င်း၏ထူးခြားသောရှေးဟောင်းဗိသုကာနှင့်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကျော်ကြားသည်။ ဒါဟာအပြည့်အဝအဟောင်းကိုမြို့အလယ်ဗဟိုမှာရှိတဲ့လေထုကိုရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးဇိမ်ခံဟိုတယ် Grande Albergo Dell နှင်းဆီ Boutique ဟိုတယ်များ၏နယ်မြေပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး။ အထိုင်စက်တွေ, များစွာသောဖဲချပ်စားပွဲ, ကစားတဲ့နှင့်အခြားဂိမ်း: ဒါဟာကစားသမားဖျော်ဖြေဖို့အရာအားလုံးရှိပါတယ်။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံတစ်စားဆင်ယင် code ကိုလည်ပတ်: 19.00 တိကျမှုနှင့် Indoor အဝတ်အစားခွင့်ပြုခဲ့ခြင်း, 19.00 ပြီးနောက် - သာညနပေိုငျးစားဆင်ယင်, ဝတ်စုံကိုသို့မဟုတ်ညစာစားဝတ်စုံ။
4 ။ Kerkira ကာစီနို
Corfu ခုနှစ်, Corfu ကျွန်း၏မြို့တော်, ဂရိအတွင်းပထမဆုံးကာစီနိုလောင်းကစားရုံများထဲမှလုပ်ကိုင်ခြင်း, 1962 အတွက်ကကစားတဲ့ဘီးပြန်လာဂရိနိုင်ငံအတွက်ပထမဦးဆုံးလောင်းကစားရုံဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုတော့ Corfu အားလပ်ရက်နန်းတော်များ၏ဖျော်ဖြေရေးစင်တာတွင်တည်ရှိသည်, နှင့် 80th ရာစုနှောင်းပိုင်း 20-ဆက်ဆံရေးသြစတြီးယား-ဟန်ဂေရီ၏ Empress ဧလိရှဗက်သည်ဒဏ္ဍာရီမင်းသမီး Sissi က၏နန်းတော်၌တည်ရှိသောခံခဲ့ရသည်အထိပါပဲ။ စားသောက်ဆိုင် 20.00 နှစ်အတွင်းဧည့်သည်များအတွက် 03.00 ထံမှ 23 မှဖွင့်လှစ်သည်။
5 ။ ဟိုတယ်ကာစီနို Xanthi
ဤသည်လောင်းကစားရုံ Xanthi ၏အနောက်မြောက်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက် Lefkos Pyrgos ၏သစ်တောဧရိယာ၌တည်ရှိသည်။
နှစ်ခုထပ်အဆောက်အဦ (2200 စတုရမ်းမီတာ) ၏ဗိသုကာတစ်မူထူးခြားသောအာကာသကိုပထမဦးဆုံးအခိုက်အနေဖြင့်ဧည့်သည်များသဘောကျတာကြောင့်ဝန်းရံကြောင်းသစ်ပင်များမြင့်မား၏ grandeur နဲ့အညီဖြစ်ပါတယ်။ ကြွင်းသောအရာပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကလောင်းကစားဝိုင်းထူထောင်မှုကြောင့် - ဟေလသလူကဒီပြည်နယ်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ကြောင်းတည်းသောလောင်းကစားရုံကြောင်းပြက်လုံး။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံ၌သင်တို့ကိုအမေရိကန်ကစားတဲ့, Blackjack, လုံးဖဲချပ်များနှင့်အထိုင်စက်ကစားနိုင်ပါတယ်။
6 ။ ကာစီနို Porto Carras
ဂရိနိုင်ငံ Porto Carras အတွက်ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂလိကလောင်းကစားရုံ Halkidiki တစ်ဦးကိုမှန်ကန်ကျောက်မျက်ဖြစ်သော Sithonia ဟိုတယ် Porto Carras ၏ဝုဏ်အတွင်းတွင်တည်ရှိသည်။ တစ်ဦး 425 slot ကစက်တွေ, ကစားတဲ့စားပွဲ 17, 13 Blackjack စားပွဲ5နှင့်ဖဲချပ်စားပွဲရှိပါတယ်။ ထို့အပွငျမွငျ့မား roller များအတွက် VIP အခန်းထဲမှာ Blackjack, ကစားတဲ့စားပွဲ5နှင့် 1 ဖဲချပ်စားပွဲများအတွက်သုံးစားပွဲရှိပါတယ်ကျသောရှိ၏။ အတွင်းပိုင်းဂရုတစိုက်တစ်ဦးရေစာဘားနှင့်ဘားလည်းမရှိ, New Orleans ၏စစ်မှန်စတိုင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
7 ။ ပေါ်တိုရီယိုဟိုတယ် & ကာစီနို
ဤသည်လောင်းကစားရုံတစ်အချို့ဟိုတယ်, Patra ၏ဗဟိုကနေပဲ 10 မိနစ် drive ကိုအတွက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါရှုပ်ထွေးသည့်ဘာသာစကား Venetian ရဲတိုက်၏ရှေ့တွင်, 35,000 စတုရန်းမီတာဧရိယာပေါ်တွင်စိမ်းလန်းစိုပြေစိမ်းလန်းသောဥယျာဉ်၌, ရီယိုအတွက်လှပသောကမ်းခြေပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ ကာစီနိုရီယိုထိုကဲ့သို့သော Blackjack နှင့်ကစားတဲ့အဖြစ်ဂန္စားပွဲပေါ်မှာဂိမ်းများကိုကမ်းလှမ်း, 279 slot ကစက်တွေနဲ့ဖဲချပ်ဝေပရိတ်သတ်တွေတက္ကဆက် Holdem Poker များအတွက်စားပွဲစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ သူတို့ကလောင်းကစားရုံဖွင့်လှစ် 24 နာရီနေ့ဖြစ်၏ကြောင့်ဧည့်သည်များက, တစ်ရက်သို့မဟုတ်ညဉ့်အချိန်တွင်မဆိုအထိုင်စက်တွေကစားနိုင်ပါတယ်။
8 ။ ကာစီနို Syros
ကာစီနို Syros Ermoupoli မြို့တွင်တည်ရှိသည်။ ဒါကအတော်လေးသစ်ကိုလောင်းကစားရုံဖြစ်ပါသည် - ကသာဧပြီ 1997 အလုပ်လုပ်လာတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ 1830 built-in ဟောင်းတစ်ဦးဟိုတယ် "ဥရောပ" ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဆောက်အဦ, ရှိခိုးနဲ့သူ့ရဲ့သမိုင်းနှင့် Cycladic ဒြပ်စင်ပွနျလညျထူထောငျ, အခုကတကယ့်ကျောက်မျက်ရတနာဖြစ်ပါတယ်။ ကစားတဲ့, Blackjack နှင့်လုံးဖဲချပ်အဖြစ် 26 slot ကစက်တွေ: ကာစီနို Syros လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်း 185 စားပွဲရှိပါတယ်။
9 ။ ရင်ခွင်ပိုက်ကာစီနို Mont Parnes
ရင်ခွင်ပိုက် Mont Parnes ကာစီနိုအပန်းဖြေအေသင်၏ဗဟိုကနေမှသာ 17 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးမှာ Mont Parnes မြို့တွင်တည်ရှိသည်။ အများဆုံးသီးသန့်နှင့် idyllic သောအရပ်တို့ကိုမ Attica အင်တုံထဲကတစ်ခုတည်ရှိသောဤသည်လောင်းကစားရုံများနှင့်ဟိုတယ်ရှုပ်ထွေးသော, ကထက်ပိုမိုလေးဆယ်နှစ်သမိုင်းရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ဒါဟာဂရိနိုင်ငံအတွက်ဖွင့်လှစ်သောပထမဦးဆုံးလောင်းကစားရုံခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကဤရှုပ်ထွေးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်မှုများ၏နံပါတ်ကျင်းပသည့်ရင်ခွင်ပိုက် Entertainment ကလုပ် SA ၏အုပ်စုတစုကဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်နှင့် 18,000 စတုရန်းတစ်ဦးစုစုပေါင်းဧရိယာတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ လောလောဆယ်ကအမြင့်မားဆုံးနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများလောင်းကစားရုံဖြစ်ပါတယ်။ 16 Blackjack စားပွဲ, ကစားတဲ့စားပွဲပေါ်မှာ 32, Punto Banco နှင့်ဖဲချပ်စားပွဲ2အဘို့စားပွဲကို2နှင့် 700 slot နှစ်ခုထက်ပိုရှိပါတယ်။ ဖောက်သည်လောင်းကစားရုံများနှင့်ဟိုတယ်ရှုပ်ထွေးလည်းအနားယူပြီးကြံ့ခိုင်ရေးကလပ်ကလပ့် Olympus ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုခံစားနိုင်။ အပြင်,
ပေမယ့်ဂရိဥပဒဂရိနိုင်ငံအတွက် operating အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများအတွက်လိုင်စင်ရရှိရန်လောင်းကစားအော်ပရေတာတားမြစ်မထားဘူး, ဒါပေမယ့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားအပေါ်လက်ဝါးကြီးအုပ် OPAP ၏အုပ်စုတစုလည်းရှိ၏။ သို့သော်ဂရိ, ကစားသမားဂရိအသုံးပြုသူများအတွက်သင့် site သတ်မှတ်ပြီးဆက်လက်ထားတဲ့နိုင်ငံခြားအော်ပရေတာများ၏အဆိုပြုချက်အမျိုးမျိုးကိုသုံးနိုင်သည်။ လောလောဆယ် English သို့မဟုတ်ဂရိထဲတွင်ဂိမ်းပူဇော်နှင့်ယူရိုသို့မဟုတ်ဒေါ်လာ US မှာနှုန်းထားများလက်ခံသော 118 အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံရှိပါတယ်။
2002 ခုနှစ်တွင်ဂရိအစိုးရတင်းကြပ်စွာအီလက်ထရောနစ်ဂိမ်းပုံစံအားလုံးကိုတားမြစ်ထားတဲ့ဥပဒေ။ သို့သော်ဤပညတ်တရား၏ပြဌာန်းချက်လောင်းကစားဝိုင်းအွန်လိုင်းဂိမ်းအော်ပရေတာများ၏လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ 2011 ၏အက်ဥပဒေဖြင့်ပျော့ပျောင်းပါပြီ။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့, ဂရိပြည်နယ်လောင်းကစားကုမ္ပဏီ OPAP ကပိုင်ဆိုင် 2030 သည်အထိအွန်လိုင်းဂိမ်း၏ပြဋ္ဌာန်းချက်အပေါ်တစ်ဦးလက်ဝါးကြီးအုပ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ 2013 အတွက်ဥရောပတရားရုံး OPAP မှခွင့်ပြုခဲ့သည့်လက်ဝါးကြီးအုပ်, ဥရောပယူနီယံဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီခြင်းမရှိပါကြောင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဂရိနိုင်ငံအတွက်ဥပဒေဥရောပသမဂ္ဂ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီပြောင်းလဲသင့်တယ်, ဂရိအခြားကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်၎င်း၏စျေးကွက်ဖွင့်လှစ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေပါလိမ့်မည်။
Rhodes ကာစီနိုဂရိနိုင်ငံအတွက်အလွန်လူကြိုက်များနှင့်အထင်ကြီးလောင်းကစားရုံဖြစ်ပါတယ်။ အဆောက်အဦးတစ်ခုလောင်းကစားရုံလုပ်ကိုင်ဖို့စတင်ခဲ့တာရှည်မတိုင်မီကဒီမှာထွန်းကားဟိုတယ်သေးမေလတွင် 24, 1927 ဖွင့်လှစ်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သော Winston Churchill, အရစ္စတိုတယ်အိုနာဆစ်နဲ့ George Papandreou အဖြစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှထင်ရှားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏နံပါတ်နေထိုင်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါဟိုတယ်ကိုထိုကဲ့သို့သော 1948 ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးဣသရေလအမျိုး၏ပြည်နယ်များ၏လက်မှတ်ရေးထိုးအဖြစ်အများအပြားသမိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ, မမြင်စဖူး။
ကာစီနို Loutraki အရှိဆုံးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတအဖြစ်အသိအမှတ်ပြု
2013 ခုနှစ်, ကလပ်ဟိုတယ်ကာစီနို Loutraki သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၌မိမိတက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ဘို့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရေး "2013 အတွက်အစိမ်းရောင် Key ကို" အတွက်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ကာစီနိုကသူတို့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်၏စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုများအတွက်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအစီအစဉ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ ယူဆောင်ရွက်မှုများရေစားသုံးမှု, စွန့်ပစ်ထုတ်ကုန်များ၏အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုခြင်း, သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများ, သတင်းအချက်အလက်ပတ်ဝန်းကျင်၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးန်ထမ်းများနှင့်ဧည့်သည်များမှဖြန့်ဖြူးလျှော့ချရည်ရွယ်နေကြသည်။
ဂရိနိုင်ငံပေါ့ပေါ့ "အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု၏ပုခက်" ဟုခေါ်သည်မဟုတ်ပါ - ကဒီမှာ 3,000 နှစ်ပေါင်းဘီစီကရေတေကျွန်းအရှေ့ဘက်ကျွန်းပေါ်တွင်ပထမဦးဆုံးယဉ်ကျေးမှုရှိခဲ့ခြင်း, Minoan အဘိဓါန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ Sparta နှင့်အေသင်၏ Poly, ဒီ gladiator တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းကိုပုံပြင်များ, ဒီ 146 အေဒီကနေအပေါ်ရောမအင်ပါယာများနှင့်မှီခိုအကြားတစ်ဦးကံဆိုးထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကြောင်း - ပင်သမိုင်း၏ကျောင်းကိုဖတ်စာအုပ်များထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုအကျွမ်းတဝင်တပြင်လုံးကိုတွင်, ဂရိသမိုင်း
ခေတ်သစ်ဂရိနိုင်ငံကဘာလဲ? အခုတော့နာမည်ကြီးအပန်းဖြေစခန်းဖြစ်ပါတယ်။ 1924 ကတည်းကဂရိနိုင်ငံပါလီမန်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့် 2002 အတွက်ယူရို၏တရားဝင်ငွေကြေးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဂရိနိုင်ငံ 13 nom (ရုရှားပြည်နယ်၏ Analogues) ၏ပါဝင်သည်ဟု, 51 ဖျားပိုင်း (ဒေသများတွင်) ၏ပါဝင်ပါသည်။ နီးပါး 98 လူဦးရေရဲ့% - သြသဒေါက်ခရစ်ယာန်, နှင့်အကြိုက်ဆုံးအားလပ်ရက် - အီစတာ။
ဂရိနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းကနေအဓိကဝင်ငွေလောင်းကစားဝိုင်းမှအစိုးရရဲ့သဘောထားကိုထိခိုက်အားလက်ခံတွေ့ဆုံဆိုတဲ့အချက်ကို။ ပထမဦးဆုံးအလောင်းကစားရုံ (ဒီတိုင်းပြည်ဟာအလွန်လူကြိုက်များ spa အပန်းဖြေစခန်းသည်) ဘေးက Loutraki မှ 1928 ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပေးထားသောန်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်နှင့်ဂိမ်းတစ်ခုဌန်ကနေဖြစ်ကြပြီးဧည့်သည်၏ခန်းမများ၏တောက်ပနေအလှဆင် Euphoria ပီတိတစ်ပြည်နယ်ကစတင်ခဲ့သည်။
မလျော့နည်းလူကြိုက်များလှည့်ခရီးသည်များအကြား«ရင်ခွင်ပိုက်»ခေါင်းစဉ် Thessaloniki အတွက်လောင်းကစားရုံ, ပျော်မွေ့။ ဒါဟာအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး3စမတ်စားသောက်ဆိုင်များ, အရက်ဆိုင်, ပင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ရှင်ရုံအဆောက်အဦးတစ်ခုလုံးကိုလောင်းကစားရုံရှုပ်ထွေးအပြင်ပါဝင်သည်။
အေသင်တစ်ဦးလောင်းကစားရုံ« Mont Parnes »ထံမှအနည်းငယ်ကီလိုမီတာ။ ဒါဟာတောင်ပေါ်မှာ Parnassus အပေါ်တည်ရှိသည်, သင်သာကေဘယ်လ်ကြိုးကားဖြင့်ရှိရနိုင်သည်။ အမှုတော်တို့ကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မှလွဲ. နေ့တိုင်းတစ်ဦးပါလောင်းကစားရုံဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိသည်နှင့် Dress-code ကိုစောငျ့ရှောကျဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် - အားကစားနဲ့ပေါ့ပေါ့အဝတ်အစားကြိုဆိုမဟုတ်ပါဘူး။
စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏မိတ်ဆွေတို့ကိုနှင့်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ Ermoupoli အတွက်ကျွန်းပေါ် Siroe option ကိုဆွဲဆောင်။ ဤတွင်အဆိုပါ 3th ရာစုအဆောက်အဦးများတည်ရှိသောအဆိုပါ 19 ဇိမ်ခံဂိမ်းခန်းအပြင်, သင်ကလှေပေါ်တွင်တစ်ဦးမမေ့နိုင်သောခရီးစဉ်နှင့်မြေအောက်ပြခန်းထဲမှာလမ်းလျှောက်ခံစားနိုင်။
ကျနော်တို့အစောပိုင်းက, နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးလက်ဝါးကြီးအုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း - အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခိုးယူသည်။ ဒါဟာလက်ရှိအွန်လိုင်းလောင်းကစား၏ခြင်္သေ့ရဲ့ဝေစုကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့သူသူမဖြစ်ခဲ့သည်။ တကယ်ကသူတို့နယ်မြေကိုဥရောပဖဲချပ်ဝေခန်းသို့စေမလိုချင်နေချိန်မှာဝေးလံသောလောင်းကစားအစည်းအရုံး RGA ဒီအခြေအနေကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြိုက်တယ်, ဒါပေမယ့်ဒေသခံပါဘူး။
ဒီနေရာတွင်သာခွင့်က်ဘ်ဆိုက်များမှာ, အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံကစားနိုင်ပါတယ်။ ဂရိနိုင်ငံသမျှသောပိုက်ဆံပျောက်တိုင်းပြည်ကနေစီးဆင်းဘူးစေသည်။ ဒါကြောင့်ပုံမှန်အတိုင်းလောင်းကစားရုံအော်ပရေတာအားလပ်ရက်အချိန်အရှုံးမပေးဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့ဒေသခံအရသာကြိုးစားဆဲအနိုင်ရရှိတဲ့များ၏ငွေပေးချေမှု၏အာမခံချက်၏ 100% သေချာဖြစ်မယ့်အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။
Acropolis ။ ဒါဟာ4အဆောက်အဦးလည်းပါဝင်သည်: အဓိကဝင်ပေါက် (propylene), အေသင်က, Parthenon, Poseidon မှာများနှင့်အသီနာ၏ဂုဏ်အသရေအတွက်အောင်မြင်ခြင်းကိုကိုယ်စားပြုသောနတ်ဘုရားများနှင့် Erechtheum နန်းတော်၏ဂုဏ်အသရေအတွက်ဗိမာနျတျော၏ patroness ၏ဂုဏ်အသရေအတွက်ဗိမာနျ။ အဆိုပါအဆောက်အဦ၏တန်ခိုးအာနုဘော်သည့်မြင်ကွင်းများကိုအနည်းဆုံး 4-5 နာရီကြာမြင့်မည်ကိုမြင်လျှင်ပေါ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်အထင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဇု၏ဗိမာနျတျော ။ တည်နေရာ: အ Acropolis နှင့် Syntagma အဓိကမြို့စတုရန်းအနီး။ ယခုအချိန်တွင်မှာတစ်ချိန်ကညားဗိမာနျတျောကိုသာအပျက်အယွင်းရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်အဘယ်သူမျှမလျော့နည်းညားနှင့်ဆက်ဆက်ကြည့်ဘို့လိုအပ်လို့ပြောရပေမည်။
သားသမီးရဲ့ပြတိုက် ။ နေရပ်လိပ်စာ: Kydathenaeon, 14; Plaka ။ 1987 ကတည်းကပြတိုက်ဖွဲ့စည်းမှုသင်တန်း၏ရှေးဟောင်းအပျက်အယွင်းများနှင့်ရုပ်တုများနှင့်စစ်ကြောင်းများကိုမြင်လျှင်ငြီးငွေ့နေသောလူကြီးများ, ထိုလုလင်သည်ဧည့်သည်များနှစ်သက်တော်မူ၏။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, ပြပွဲနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲအမျိုးမျိုးတို့ကို: သွားရာတစ်ခုခုကိုအစဉ်အမြဲရှိပါသည်။
ဂရိသာ costume ၏သမိုင်း၏ပြတိုက် ။ နေရပ်လိပ်စာ: 7, Dimokritou ။ အားလုံးခေတ်မှသည်အဝတ်အစားထက်ပို 250,000 ပစ္စည်းများပြတိုက်ရဲ့စုဆောင်းမှု။ ဖက်ရှင်ကိုစိတ်ဝင်စားသူသည်လူတိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဂရိစတိုင်ကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဂရိနိုင်ငံရဲ့စစ်ရေးပြတိုက် ။ နေရပ်လိပ်စာ: လမ်းဆုံ Vassilissis Sophia AV ။ နှင့် Rizari,2။ ဂရိနိုင်ငံငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုသိရအဖြစ်က၎င်း၏စစ်ရေးရေးရာကျော်ကြားသည်။ ဒီနေရာတွင်ကတ်များနှင့်ယူနီဖောင်းကနေသမိုင်းဆိုင်ရာယူနီဖောင်းမှစစ်တပ်ရေးရာဆက်စပ်သမျှသောသူတို့, ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
အကြိုက်ဆုံးသောက် -Coffee ။ ဒါဟာစာသားမျိုးကွဲလီတာအမျိုးမျိုးတို့ကိုထဲမှာအရက်မူး, သို့သော်လက်ဖက်လေးစားမမူ
ဂရိ souvlaki ၏အနှစ်သက်ဆုံးအစားအစာ, ပါးလွှာ skewers အပေါ်အသေးစား kebabs, များသောအားဖြင့်ဝက်သား;
တစ်နှစ်လျှင်နေရောင်ခြည်၏ 250 ရက်ပေါင်းထက်ပိုအိမ်၏ခေါင်မိုးပေါ်တွင်အများအပြားနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ရှိပါတယ်;
ပင်လယ် 136 ကီလိုမီတာထက်မပိုကြောင်း, ဘယ်နေရာမှာမဆိုတိုင်းပြည်အတွင်းထံက၎င်း,
"ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း" ငါတို့ "ဟုတ်ကဲ့" အဘို့ဂရိဖြစ်၏
ကျောင်းတို့တွင်အင်္ဂလိပ်မဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်,2ဘာသာစကားများကိုသင်ယူ;
ဟေလသလူကအရမ်းဘာသာရေးများမှာ - နေ့တိုင်းကျောင်းမှာအတန်းတစ်ဦးဆုတောင်းပဌနာ, တစ်ဦးအနှစ်သက်ဆုံးအားလပ်ရက်ကိုဖတ်ရှုမတိုင်မီ - အီစတာ။
Rhodes နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီနေရာစုပြုံတစ်ဦးသန်းလိပ်ပြာအဘို့အကျော်ကြားဇာတ်စင် Post ဖြစ်ပါတယ်
0.1 ထိပ်တန်း 10 ဂရိအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း